Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Shaatax oo ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021-ka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Shaatax oo ka hadlay xaaladda cakiran ee...
Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Shaatax oo ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Mudane Cismaan Tahliil Shaatax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Previous articleWarar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay diyaaradaha Mareykanku ka fuliyeen deegaano ka kala tirsan goboollada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose.
Next articleWaxaa saacado kadib Magaalada D.C lagu wadaa in lagu caleema-saaro madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykan, Joseph Robinette Biden Jr.
magaalada Cape Twn oo 9 Qof oo Milkiilayaal Daraawalada BL-ka...
Dowladda Sacuudi Carabiya oo taageero u muujisay madaxweynaha dalka Tunisia